Anarana iraisan’ny eny anivon’ny Antenimiera: mbola tsara toerana ho Praiminisitra i Ntsay Christian | NewsMada
Anarana iraisan’ny eny anivon’ny Antenimiera: mbola tsara toerana ho Praiminisitra i Ntsay Christian
Nivory tsy an-kiato ny eo anivon’ny Antenimieram-pirenena ny alatsinainy ary nandinika ny anarana hatolotra ny filoha Rajoelina, hotendrena ho praiminisitra. Efa maherin’ny 100 ny sonia voaangona amin’ny hitazonana amin’ny toerany, ny Praiminisitra Ntsay Christian.
Etsy andaniny, efa nivoaka ny ho firafitry ny governemanta vaovao, miainga amin’ny fanatanterahana ny IEM.
Praiminisitra lefitra miisa efatra
Hisy ny praiminisitra lefitra hisahana ny fandrindrana sy ny fanaraha-maso ary ny tomban’ny IEM. Manampy izany ny minisitera enina ho an’ny sosialy hotarihin’ny praiminisitra lefitra misahana ny mponina sy ny vehivavy. Eo koa ny minisiteran’ny Fahasalamana ary ampiarahana aminy rano sy ny fanadiovana. Lasa minisitera iray ny fanabeazana sy ny fampianarana ambony ary ny fikarohana siantifika. Hitokana tahaka ny teo aloha ny minisiteran’ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Tsy miova ny minisiteran’ny Asam-panjakana ary ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena.
Valo ireo minisitera ho amin’ny fanamafisana ny fampandrosoana, hotarihin’ny praiminisitra lefitra misahana ny Asa vaventy sy ny fitaterana ary fanajariana ny tany sy ny fotodrafitrasa. Natambatra ao izany ny fitaterana sy ny asa vaventy raha minisitera tokana izany teo aloha. Manampy izany ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny fa sady hisahana ny tanora sy ny fampandrosoana. Mitokana tahaka ny teo aloha ny minisiteran’ny Vola sy ny Fitsarana. Mbola eo koa ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, saingy hiampy ny fiarovam-pirenena eo ambany fiahian’ny zandarimarim-pirenena izany. Mitokana hatrany ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena. Hitambatra minisitera ny Fifandraisana sy ny paositra ary ny fampiroboroboana ny nomerika. Tsy miova kosa fa eo ihany ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka.
Minisitera hisahana ny paikady ho amin’ny toekarena
Enina ireo minisitera ho an’ny paikady ara-toekarena. Hitarika izany ny praiminisitra lefitra ho an’ny indostria sy ny sehatra tsy miankina. Natambatra aminy koa ny varotra sy ny fanjifana. Nampiarahana minisitera iray koa ny fambolena sy ny fiompiana, miaraka amin’ny harena an-dranomasina. Mitokana ny minisiteran’ny Toekarena. Miaraka kosa ny minisiteran’ny Fizahantany, ny famantarana ny toetry ny andro, ny tontolo iainana ary ny ala. Nampiarahana minisitera iray ny angovo sy ny harena an-kibon’ny tany ary ny akoranafo sy ny solika. Minisitera faha-22 kosa ny kolontsaina sy ny asa tanana ary ny vakoka.